HomeAfaan OromooUummatni keenya Amma yoomitti Dhumaa?
Damee Boruu tin: Adoolessa 26, 2018
Naannoon an gudda’etti muka dheertuu jedhamu kan muka biraa irratti malee of lafaa hin biqilu. Barumsi koos waa’ee mukaa qorachuu wajjin waan wal hin qabnnee amma yoona maaliif akka tahe adda baasee illee hin beeku. Warri beekan gara fuula duraa akka nuuf ibsan hawwii koo ti. Dheertuun muka irratti biqiluu bishaanii fi nyaata lafa keessa isaa argatu irraa xuxxee goggossee ajjeessa. Akka offii hin banneef immoo iji isaa yaroo bishaatu muluqee muka biraa akka haphee qabata. Dheertoon dhala namaaf qoraanii tahee fi dhimmaa gara baasuuf muka oolu hin dandeenye. Waaqaayyoo muka akka isaa akka balleessuuf waan isa uume fakkaata.
Anaaf OPDOn akkuma muka dheertuu sana diinni akka sanyii ishee Uummata Oromoo balleessituuf jalqabaa kaastee waan karoorfatte dha. Bara Wayyaanee Waggaa 27 darban kana meeshaa tahe qabeenya Oromiyaa akka TPLF xuxxuu fi dhiigni ilmaan Oromoo Bahaa amma Dhihaa Kaabaa amma Kibbaa akka lolaa gannaa dhangala’ u gochaa kan ture OPDO dha. Yaroo Uummatni keenya qabsoo wal irra hin cinnee TPLF irratti gochaa ture kadhannaan koo guddaan OPDOn Uummata keenya fi TPLF jidduuti akka baatu ture. Yoo OPDOn hin jiraanne TPLF lubbuu dheeraa akka hin qabaanne hunda keenyaafuu ifaa natti fakkaata.
Yaroo qabsoon Uummata Oromoo itti muddee TPLF afuura baafachuu dhorku Mootummaan EPRDF baatii sadii ol wal gahii godhee kan xaxxaa ture shira amma ija keenyaan argaa jiru kana. TPLF walii gala uummata Itoophiyaan jibbamuu fi keessatttu Uummata Oromoon tufamuun kisaaraa siyaasaa keessaa bahuu hin dandnye keessa akka galtu godhee jira. Kana dooda humnaan uummata kana cabsanii bituun akka hin danda’amne yaroo ifa tahuuf fuurmaata siyaasaa barbaaduun dirqama itti tahee jira. Furmaanni siyaasaa yaroof argatan OPDO fuula dura dabarsanii of gara duubaa darbuu ture.
Haalli kun bareechee hojjeteef jira. Qabssoon bilisuummaa Uuummata Oromoo belbelaa jiru bakka jirutti akka dhaabbatu tahee jira. TPLF bareechitee afuura fudhachaa fi fuula duraa of ijaaraa fi of qindeessaa jirti. Caasaa mootummaa tahe kan dhuunfaa dingadee biyyaa wajjin kan of harkaa qabu TPLF akka tahe dagatamuu hin qabu. Bakka mijjaa’aa taheef hundatti honkora uumuu fi nagaa boorreessuun akka nagaan biyya sana keessatti hin tasgaboofnee gochuun hojii ishee keessaa isa duraa ti. Haqa Uummata Orommoo akka reenfaa lafa irra gototee kan irra deemaa jiru OPDO dha. Waan olaantummaan TPLF nu aarsuuf jecha ishee balaalefachuuf fiigana. Rakkinni Uummata Oromoo inni duraa garuu OPDO dha. Dhugaa kana hubachuu fi fudhachuuf baayyee yaroo rakkinnu nan arga.
Haa tahu malee, TPLF Badhaasaa fi Dachaasaa , Abdalaa fi Adam, Sartuu fi Saraa adda baaftee hin beektu. Maqaa isaanii, bakka isaan jiraatan, mana isaanii fi karaa mana isaanii kan beeku OPDO qofa. Cubbuun ilmaan Oromoo irraatti bara dheeraa kana guutuu raawwatamaa tureef itti gaafatamni duraa kan qabu OPDO dha. OPDOn Mootummaa naannoo Oromiyaa erga taate nageenya Uummata Oromoo fi qabeenya Oromiyaa tiksuun dirqama ishee ture. Dabalatan qaama EPRDF kan Mootummaa Federaala Itoophiyaa bushu waan taateef itti gaafatamni ishee irra jiru dacha dha.
Haalli qabatamaan ragaan kana fakkaatee utuu jiruu maaliif Qabsoon Uummata Oromoo ABO, WBO, Qeerroo Bilisummaa Oromoon dursamee fi Uummata Oromoon utubamee Oromiyaa guutuu keessatti finiinee diina duraa humna Wayyaanee jilbeefachiisaa jiru injifannoo isaa barruu OPDO harka kaa’ee kan dhaabbatee ilaaluu Filate? Qabsson Qeerroo Bilisummaa Oromoon godhamaa ture biyya lafaa duratti dinqisiisamuu isaa caalaa uummata karaa nagaa qabsoo godhu hundaaf kan fakeenya tahu jedhamee hubatamaa ture. Akka galma isaa hin geenyeef burjaaja’uu fi dongorri maaliif isa qabate? Wareegamni qaaliin itti bahee jira. Qaqqallii kumaatama itti dhabnee jirra. Maalif qabsoon dhiiga kumaatamaan itti dhangalaafne milkii dhabee OPDO jidduu ummata keenya fi TPLFf baasuu dhiisee olaantummaa OPDO ol baasee argame? Suuta suuta OPDOn TPLF gara golaatti achi dhiibaa afaan dhadhaa dibatee Qeerroon keenya fi uummata keenya wajjin qabsoofne jijjirama fidaa jirra jechaa amma qabsoo Uummata Oromoo dhunfatu teenyee eegne? Waan uummatni Oromoo maraa beeku deddeebisanii sobuun waan dhugaa tahuuf itti fakkaata.
Jijjirama gochaa jira jettee kan OPDOn geerartu namoota wal keessa akka kartaa bawazuu dha. Jijjiramni sirnaa amma hin godhamne ammas akkuma kana duraa kan biyya dhiitee bitaa jiru Mootummaa EPRDF akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Maqaan waraabessa guyyaa jedhu tokko warra uummata gowwomsaa jiraniin afarsamaa jira. Erga waraabessa tahuun isaanii beekame uummata keessaa fi karaa irra kan gadhiisaman akka caalaa nama fixxanii fi biyya balleesanii akka tahe ifa jira. Yoo dubbiin kun dhugaa hin taane itti gaafatama jalaa wal baasuuf uummata kijibaa jiru. Yoo hidhuu illee hin dandeenye maaliif badiin TPLF ifatti hin balaallefamtu? Dhiifama” medameriin” jiraachuu isaan irranfadhe.
Bara 1974 Mootummaa Haayile Selaassee kan kufsee qabsoo bartootaa ture. Amma humni waraana Mootummaa wajjin tahee bartoota tumaa ture. Gaafa Mootummaan Haayile Selaassee kufu humni waraana KOree Dargi jedhamtu tokko dhaabbatee akka warra bartootaa ddhaddanno farra imperiyaaliziim , farra Abbaa Lafaa fi farra Sooresa Biroo jedhee qabsoo bartootaa fudhatte dhuma irratti bartoota lafa irraa fixe. Obbo Lammaa Magarsaa isaa qabsawwaa fakkaatanii qabsoo nama biraa hatan Dargii irraa ergifate.
Akka Saba Oromoo itti jabinaa fi laafina keenya utuu gadi fageesine angoollollee of ilaallee bareeda natti fakkaata. Qeerroon Bilisummaa Oromoo murannoo fi onnee guutuu haa qabaatan malee muxxannoo shira warra Habashaa waan beekan natti hin fakkaatu .Akka Oromoo itti hundi keenya namni Oromoo tahe waan sobee nu gowwomsu nutti hin fakkatu. Nama keenya taanan shakkii tokko malee morma keenya kenuuf feena. Dadhabbii guddaa dha. Namni keenya Habshaa jala oolee hattuu fi sobduu tahee jira. Obboleessaa fi obboleetti isaa gurguree/gurgurattee jiraanya foyyeefachuu warri filatu xiqqaa miti. Kanatu moogolee nu buusaa jira.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Obbo Lammaa Magrsaa afaan dammaa ammanee gaafa gad itti dhiifne maal akka godhu arguuf teenya. Yaroo krnnameef kana keessa dantaan, horiin, aangoo fi mishoomaan adda isaan hiree akka wal irratti isaan bobbaasuuf deemu bullee oollee agarra. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa yaroo Oromoon of harkaa qabu qabsoon gochuun qajeelaa miti jedhanii OPDOn diaspora fi biyyaa uummata keenya burjaaresuuuf sirbaa jiru. Ayyan –ilaallattonni bu’aa dhuunfaan argatanifdhaabbatu malee Uummatni Oromoo kan durii caalaa hunkuramaa, jeeqamaa , shorkokeessamaa, hidhamaa , ajjeefamaa fi qabeenyi isaa saamamaajiraachuun isaan hin gadisiisu. Uummatni Oromoo humna Mootummaa naannoo Oromiyaa, Mootummaa EPRDF fi humnoota Liyuu Haayil jedhaman kan Somalee, kan afaarii fi Beenshaanguliin utuu afura hin baafatiin dararamaa jira.
Kun hunduu tahaa deemsa kana keessa bu’aa dhuunfaa mataa isaaniif argachuuf deeman qofa ilaalu. Warri kun warra nagaan qabsoo goona jedhee gara biyyaa deemuu filatanis ni ilaala. Namoonni baayyeen isaanii biyya alaa kana keessati hojii hin qaban. Afaan kaa’a (welfare) mootumaa irra argataniin jiru. Kana irraakan ka’e biyya galanii waan danda’an soroobachuu wayya jedhanii warra filatan. Rakkinni saba isaanii isa duraa tahee yoo itti argamuu illee baate uummatichaaf gadduu qabu.
Warri yaroo Oromoon Masaraa Miniliki galee jiru kana qabsoo gochuun barbaachisaa miti jedhuu dogongora. Oromoon Masaaraa Miniliki galuun waan guddaa dha haa jennu. Qaaman nama Oromoo tahu malee kan achi kaawwate EPRDF yoo tahu hojiin isaas seeraa fi sirna EPRDF tiksuu dha.Utuu Oromoon ilma isaa filatee achiin gahe aangoon jiru kan uummata kana taha. Amma garuu Mumichi Ministeera amma aangoo sana irra jiru bakka sana nama EPRDF filatamuu eegaaf jira. Yoo inni hin jiraannne nama Oromoo miti kan bakka isaa bu’uuf deemu. Namni EPRDF yaroo biraa filatu nama Oromoo tahuu dhiisii dhanda’a.
Ammaa waan nama irratti wal dhibuu dhhifne akkaata itti uummatni keenya abba biyyummaa isaa mirkaneefatu irratii qabsa’uun haa dursu. Kana dura TPLF waan olaantummaa qabduuf hammeenya uummata keenya irratti raawwatamuuf Agaazii abaaraa olla. Uummatni keenya caalatti kan dhumaa jiru erga OPDOn olaantummaa argatee akka tahe wal nuu hin gaafachiisu. Duris kan uummata keenya ajjeessa ture OPDO dha. Har’as kan ajjeessaa jiru OPDO dha. Qabsoon Uummata Oromoo summii OPDO kana yoo of keessaa qulqulleesse gatuu hin danda’u tahe bara baraan akka qaana’ee fi boo’e jiraata yoo dugugamee lafa irraa hin banneef
Yaroo darbee Harargee keessatti dubartii ulfa guutuu Ayyaantuu Mahaamed Wayyaanetu ajjeesse jennee abarree, boonyee, gaddinee dhiifne. Kaleessaa dubartii ciniisfatee cininsuun dahuuf gara mana waldhaansaa jartiin fiigaa kan maqaan ishee Birhaanee Maamoo jedhamtu Dambi Doolloo keessatti waraana Obbo Lammaa Magarsaan rasaasan tumamtee mucaa dhalachuu ka’e wajjin ajjeefamtee jirti. Kanoo maal jenna? Waan jedhamuu fi tahuu qabu uumata Oromoof dhiisu naaf wayya?
J. Biraanuu Juulaa fi Obbo Lammaa Magarsaa WBO fixxuu torbaan lama duwwa akka isaan barbaachisuuyaroo darbe dubbataniin turan. Kunoo amma torbaan sadaffaa isaan ti. Gadi bahanii diira loluu isaanii dhagaa hin jiru. Magaala keesaa deeman dubartii fi ijoollee shorkokkeessaa olu. Hoojiin gadadoo silaas waan gadaado hojjechuu qofa. ABO fi WBO gooftaan ishee Malasaa Zeernawwii iyyuu balleessu hin dandeenye.
Uummatni Orommo maaliif warra gadadoo kana mataa isaa irratti baatee akka taa’uuf naa hin galu. OPDOn maqaa saba keenya waamuun qaanii guddaa dha. Dheengada immoo Balee Gobaa keessatti Uummatni Oromoo goota isaa tokkoo sidaa daabbachuuf jennaan harcaatuun nafxanaa uummata keenya rasaasan akkoofti. “Yoo abba tufattan saree abbaa jalatti dhaannu”, jedhan. Warra maqaaf Oromoo himatee suusiin Itoophiyaa isaan rakkisuu fi warra akeeka Miniliki bakkaan gaheef deemtuu uummata keenya balaaf saaxilaa jira. Utuu oollee hin bullee humna keenya walitti ittichinee diina nutti marsaa jiru yaroon of irraa faccisuu qabna. Kanaaf ammas Qeerroon Bilisummaa Oromoo ummata keenya gurmeessuuf dirqama seenaa qaba.